Umtsalane wabakhenkethi eSamoa: Umnyhadala weTauila waseSamoa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Umtsalane wabakhenkethi eSamoa: Umnyhadala weTauila waseSamoa
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseSamoa eziziiNdaba • Iindaba zeWired Travel
Julayi 25, 2018
Ukusukela oko yasekwa ngo-1991, umnyhadala weTauila waseSamoa ukhule waba ngomnye weyona mibhiyozo yonyaka ibhiyozelwayo eSamoa kwaye yenye yeminyhadala yenkcubeko enkulu eSouth Pacific.
Joyina imithendeleko njengoko iSamoa iba liziko lenkcubeko leSouth Pacific kwaye ibhiyozela zonke izinto zaseSamoa ngexesha loMnyhadala weTeuila! Umbhiyozo wokwenyani wenkcubeko yaseSamoa neyasePolynesia, lo mnyhadala ngumsitho waminyaka le ngoku ungunyaka wama-28, unemisebenzi emininzi kunye nemiboniso ebanjelwe kwilizwe liphela, ngakumbi e-Apia, idolophu elikomkhulu laseSamoa.
Umnyhadala ubizwa ngegama lentyatyambo ebomvu e-teuila ebomvu, intyatyambo yesizwe yaseSamoa kwaye ihlala ibonakala kwiziqithi. Umnyhadala walo nyaka uzakuqala nge-2 ukuya kwi-8 Septemba. Iindwendwe ziya kuba nomdaniso weSamoan, ubugcisa, i-gastronomy kunye nokuvalwa kwendabuko ngokwesiko.
Rhoqo ngonyaka amawaka ayagalela kwikomkhulu ukuze babone i-extravanganza enguMsitho wokuvula, obanjwa kulo nyaka nge-2 kaSeptemba. Ukuvulwa ngumboniso webhongo lenkcubeko yaseSamoa ngomboniso weentyatyambo, abadanisi beemela zomlilo eSiva Afi kunye nomculo wasekhaya ubeka indawo yeentsuku ezintlanu zolonwabo. Omnye umboniso omangalisayo ngumboniso weNtloko yeFiafia, apho imidaniso yezolonwabo kunye nokuzonwabisa zimele ilifa lenkcubeko leziQithi zeSouth Pacific ezahlukeneyo.
Lo mnyhadala unento eninzi egcinelwe abo bathanda ukubambeka kwicala lokuyila lezinto, ngemiboniso yobugcisa kunye neyezandla ebonelela ngethuba lokuthatha inxaxheba kwizifundo zesiko lokwaluka, ukukrola iinkuni kunye nokhuphiswano lwee-cocktail, ezenzeka yonke imihla eSamoa Cultural Village . Iindwendwe zinokubona ubugcisa obukade bukhona bokwenza umvambo ngendlela yaseSamoa, isakhono esele sidluliselwe kwisizukulwana ukuya kwisizukulwana ukwenza uyilo olwahlukileyo lomkhosi. Abathandi bokutya bayakufumana ukubizwa kwabo phakathi kweendawo ezininzi zokutya ezisebenza kwiindawo ezikhethekileyo zaseSamoa kunye nomboniso wemveli wase-Umu ngoLwesithathu baya kubona ukutya okuhanjiswa kwi-oveni yangaphantsi ukondla izihlwele.
Zininzi ezinye izinto ezenzekayo kunye neziganeko ezenzeka evekini kubandakanya nePolisa leBhanti yokuKhulisa iParade, umboniso ogqwesileyo weSamoa, uMiss Samoa Pageant kunye noMdlalo bhanyabhanya waseTeuila ePlaza. Njengokuba umnyhadala usiya esiphelweni, iindwendwe ziyakhuthazwa ukuba zize kumsitho wokunikezela amabhaso ngokusesikweni ukuhlonipha bonke abo bathathe inxaxheba kule veki. Ngolwazi oluthe kratya ngeSamoa kunye noMnyhadala weTeeila, ndwendwela www.samoa.travel.